Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo » I-Seychelles iphulukana novulindlela woKhenketho eMyriam St. Ange
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • abantu • Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo • Tourism
UMyriam St. Ange
UMyriam St. Ange usweleke ngokudabukisayo ngoMgqibelo, nge-18 kaSeptemba 2021, kwiintsuku ezine emva kokuzalwa kwakhe kwe-74th kwisiqithi saseLa Digue.
Intsapho yaseSt Ange ibibuthelene kwezokhenketho eLa Digue kwiintsuku ezimbini zokugqibela ukuba ibe ecaleni kodade wabo.
Usweleke engqongwe ngoonyana bakhe, abantakwabo, kunye neentsapho zabo kwinto ebonwabisayo ngokweemvakalelo.
U-Myriam kunye noonyana bakhe aba-2 baguqula ikhaya losapho laseLa Digue Island eSt Angel kwihotele yosapho iChateau St Cloud.
UMyriam St. Ange kunye noonyana bakhe ababini uCarl noSydney Mills baguqula ikhaya losapho laseLa Digue Island St. Ange, i-Chateau St. Cloud eSeychelles, bayenza ihotele yosapho njengoko babegcina iimpawu zekoloniyali zesakhiwo sodumo.
UMyriam noonyana bakhe baqhuba ngempumelelo ngelixa eqhubeka nokudlala indawo ephambili kuphuhliso lwezokhenketho kwezi ziqithi.
Intsapho yaseSt.Ange yayihlanganisene kukhenketho lwe ILa Digue kwiintsuku ezimbini zokugqibela ukuba secaleni kodade wabo, kwaye usweleke ejikelezwe ngoonyana bakhe, abantakwabo, kunye neentsapho zabo kwinto ebisendimnandi.
UMyriam St. Ange ngudadewabo ka-Alain St. Ange, owayesakuba ngu-Mphathiswa Wezokhenketho, Ukuhamba ngeenqwelo moya, amazibuko kunye nolwandle iiSeychelles, kwaye uninzi lwamalungu osapho lwakhe namhlanje ngabadlali abaphumeleleyo kwezokhenketho eSeychelles.